Dalian TekMax ayaa la aasaasay. Undertook mashruuca nadiifinta ugu horeysay.
Go'aamiyey jihada ganacsiga ugu weyn ee shirkadu waxay ahayd beerta injineernimada qolka nadiifinta.
Markii hore la aasaasay nidaamka maamulka shirkadda.
Wuxuu gudbay shahaadada nidaamka maaraynta tayada ISO9001. Wuxuu dhistay qaabka uur -ku -jirta ee dhaqanka shirkadaha “hal koox oo leh hal nolol hal shay”.
Waxay biloowday inay ka qayb qaadato dhismaha warshado aad u baaxad weyn oo nadiifin ah.
Undertook Qingdao Haier mashruuc oo galay beerta nadiifinta warshadaha Undertook macaamilka brand ugu horeysay ka mid ah Fortune 500.
Undertook mashruuca nadiifinta bayoolojiga markii ugu horreysay waxayna ballaarisay baaxadda ganacsiga ilaa warshadaha cuntada. Soo bandhig fikradda horumarinta ee “si aad ugu xirnaato silsiladda sahayda ee Fortune 500 ″.
Wuxuu ku guuleystay tartankii wuxuuna qabtay mashruuca Hisense, kaas oo kor u sii qaaday wacyigelinta sumcadda iyo saamaynta suuqa ee TekMax. Soo bandhig qiyamka asaasiga ah ee shirkadda “daacad ah oo aamin ah, oo hadal furan ka dib tixgelin, masuuliyad sare iyo dulqaad”.
Soo bandhig aragtida horumarka ee shirkadda oo ah “abuurista adduun nadiif ah”. Waxay isku dayday inay ku dabaqdo tikniyoolajiyadda moodelinta 3D farsamaynta injineernimada, taas oo aasaaska u dhigtay guud ahaan horumarinta teknolojiyadda BIM ee shirkadda.
Soo bandhig fikradda horumarinta ee “si fiican u shaqee, oo shaqo hel”. Waxaa la aasaasay xiriir iskaashi istiraatiiji ah oo lala yeesho Kooxda Inong Mongolia Yili Group waxayna qaadatay mashruucii daahirinta aqoon isweydaarsiga. Istaraatiijiyadda horumarinta shirkadda oo la caddeeyay oo lagu beegsaday macaamiisha labada jiho ee beeraha cuntada iyo dawooyinka.
Shirkadda waxaa loo ansixiyay inay tahay shirkad farsamo sare oo heer qaran ah. Teknolojiyadda BIM ayaa markii ugu horreysay lagu dabaqay wareegga nolosha oo dhan ee mashruuca daahirinta. Tiro ka mid ah shatiyada teknolojiyadda moobiilka ee adeegsiga ayaa la helay, taasna waxay ku salaysnayd si loo dejiyo hannaan caadi ah oo hal -abuurnimo madax -bannaan.
Mugga iibku wuxuu dhaafay 100 milyan. Sawirka guud ee sumadda VI ee shirkadda ayaa la casriyeeyay. Waxay soo saartay jiilkii kowaad ee mashiinka rakibidda saxanka birta midabka. Wuxuu bilaabay qorshihii beeritaanka talanti ee dhalinyarada wuxuuna u aasaasay farsamada tababarka hibada ee shirkadda.
Wuxuu marka hore soo jeediyay habraacyada maareynta dhismaha ee warshadaha. Waxaa la aasaasay dhirta qalabka koontaroolka tooska ah, waxayna si tartiib tartiib ah u ballaarisay qaab -dhismeedka warshadaha ee shirkadda. U go'aamiyey jihooyinka horumarinta istiraatiijiyadeed ee shirkadda inay tahay jaangoyn, hannaan, caqli badan.
Undertook mashruuca nadiifinta dibadda ugu horeysay. Xarunta shirkaddu waxay u guurtay dabaqa 7aad ee xarunta Xinxing Xinghai. U soo gudbi qorshaha horumarinta shirkadda ee "Saddex tallaabo oo horay loo qaaday shan sano gudahood". Waxay soo saartay nidaamka ERP ee shirkadda waxayna dejisay nidaamkeeda maaraynta macluumaadka. Soo bandhig bartilmaameedka horumarinta ee noqoshada isku -dhafka nidaamka bay'ada la kontoroolo oo leh awoodda gaarsiinta ugu xooggan iyo tiknolojiyadda hormuudka u ah Shiinaha
Mugga iibku wuxuu dhaafay 250 milyan. Waxaa la aasaasay waaxda ganacsiga caalamiga ah waxayna bilaabeen inay dejiyaan qaabeynta suuqa dibada. Wuxuu dhidibay nidaamka shuraakada wuxuuna fuliyay qorshaha lahaanshaha shaqaalaha.
Daaqadda Qolka nadiifka ah, Habka Biyaha Qaboojiyay, Sifaynta Unugga Hawada Cusub, Qaboojiyaha Hawada Qolka nadiifka ah, Daaqadda Qolka Nadiifinta Qolka, Qolka Nadiifka ah,